Yini ebaluleke kunazo zonke kwi-website SEO yekampani eqashisayo eholide?
I-ejensi yokuqasha iholide yibhizinisi lezinkathi ezithile ezingaletha inzuzo enhle kumnikazi uma inamandla e-inthanethi ekhona. Kodwa-ke, uma uqeda phansi ezenzweni zenjini yokusesha, ulahlekelwa amathuba akho ebhizinisi kanye nokuthengisa. Ukwenza ibhizinisi lakho liphumelele, udinga ukwakha iwebhusayithi enobungane futhi ukwenze ngokuvumelana nawo wonke amazinga we-Google. Ngokusebenzisa amasu we-SEO ayisisekelo, uzokwazi ukuthuthukisa isikhundla sakho sewebhusayithi futhi ukhange ithrafikhi yezinga eliphakeme kwiwebhusayithi yakho yokuqashwa eholide. Nazi ezinye izeluleko ze-SEO eziqondile ezizokusiza ukuthi uthuthukise ukutholakala kwebhizinisi lakho ku-intanethi.
Iwebhusayithi SEO yenkampani eqashisayo eholide
impendulo efanele mayelana nombuzo womsebenzisi, ibhu yenjini yokusesha ibhalela ibhizinisi lakho le-VR 'ngamagama athile okusesha. Uma okuqukethwe kwakho kusayithi kuhambisana nombuzo womsebenzisi, i-Google isebenzisa njengesignali ukuze uthuthukise isimo sakho njengesizinda esigunyaziwe nesifanelekayo. Ukufanisa imibuzo yakho yamakhasimende, kungenzeka ucabangele ukuthi yimaphi amagama abasebenzisi abangasesha uma bezama ukuthola i-ejensi yakho yokuzivocavoca, bese ufaka lamagama angukhiye kokuqukethwe kwakho. Ungasebenzisa imigomo ejwayelekile njenge "indawo yokuqashisa iholidi" noma "inkampani ehlinzeka ngamasevisi aqashisayo eholide. "Kodwa-ke, le mishwana eyinhloko iyancintisana kakhulu futhi ingase ingakulethi umgwaqo omkhulu. Yingakho udinga ukucabanga ngemisho eminingi yemvelo yesikhathi eside abantu abayisebenzisa ekukhulumeni kwansuku zonke. Ukuze wenze lula ukucwaninga ngegama elingukhiye, ungasebenzisa amathuluzi akhethekile e-intanethi njenge-Semalt Auto SEO noma i-Google Keyword Planner.
Izincazelo ze-Meta zibalulekile ekuboneni kwebhizinisi lakho ku-intanethi njengoba zibonisa kubasebenzisi abajwayelekile ukuthi isayithi lakho liphathelene. Isebenza njengokubuka kuqala kokuqukethwe kwewebhu futhi kusiza abantu ukuba banqume ukuthi badinga ukulandela umthombo wakho wewebhu ukuthola olunye ulwazi noma cha. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukwengeza amagama angukhiye emigwaqweni ezichazweni zakho ze-meta ukuze uvumele ukusesha kubhale isayithi lakho. Imidwebo ye-meta ehlelwe ngokugcwele izoshukumisa izinga lokuchofoza-up futhi ithuthukise i-SEO inkampani yakho eqashisayo yeholide.
. Kuthatha nje imizuzu embalwa ukudala i-akhawunti yebhizinisi ku-Facebook noma ku-Instagram. Noma kunjalo, inikeza inkampani yakho amandla amakhulu emhlabeni wezenhlalakahle. Lapho udala izincazelo zakho zephrofayili ezihlukahlukene, yenza okuqukethwe okuyingqayizivele ngayinye yazo. Ngaphezu kwalokho, qaphela isimo sokubukwa njengoba abasebenzisi bekubona kungcono kunamathekisthi. Yingakho ukudala izithombe zekhwalithi, amahluzo amavidiyo, namavidiyo ukwenza i-akhawunti yakho yebhizinisi kuma-social media abonakale kubalandeli bakho.
Ungase ucele amabhizinisi akho asendaweni ukuthi axhumane nesayithi lakho eliqashisayo lokuvakasha kusuka kumakhasi abo abalingani. Ngaphezu kwalokho, ungazuza kubhulogi ngokuthumela, ngokubambisana nabaholi benkolelo emakethe yakho emakethe. Ukwakhiwa kwesixhumanisi kuyindlela yokugqugquzela ukuvumela kwebhizinisi lakho nokuthuthukisa ukuqaphela umkhiqizo wakho Source .